Iisaveyi Standard bayandidika nxaxheba, kodwa inakho ukusebenza yaye kufuneka utshintshe.
Ukuza kuthi ga ngoku, ndiye ndinixelele malunga neendlela ezintsha umbuzo ukuba incediswe udliwano-elawulwa computer. Noko ke, elinye Icala udliwano-elawulwa computer kukuba akukho ndlebe ukuze bancede ukubaphembelela inxaxheba. Le yingxaki, kuba iisaveyi ixesha elininzi kwaye i yadika. Ngoko ke, kwixesha elizayo, uphando abayili uza kufuneka bayile ngeenxa nxaxheba yabo uze wenze inkqubo yokuphendula imibuzo mnandi yaye umdlalo-like ngaphezulu. Le nkqubo wambi ebizwa gamification.
Obonakalisa ukuba ingakhangeleka uphando emnandi, makhe siqwalasele Friendsense, uhlolisiso leyo wangumqulu njenge umdlalo on Facebook. Sharad Goel, ubusika Mason, kwaye Duncan Watts (2010) wayefuna ukuqikelela ukuba abantu abaninzi bacinga ukuba ngabahlobo babo kangakanani kunene ngathi ngabahlobo babo. Lo umbuzo malunga ukufana zokwenene nezibonwayo sengqondo ufumana ngqo ubuchule abantu ukuqonda kakuhle imeko yabo kwezentlalo kwaye luchaphazela dyobhana ezopolitiko kunye namandla entshukumo utshintsho ekuhlaleni. Kwengqiqo na, isimo ukufana zokwenene nezibonwayo yinto elula ukulinganisa. Abaphandi kuphela nje abaninzi abantu izimvo zabo wabuza waza wabuza nabahlobo zabo izimvo zabo (oku ivumela Esilinganisa isivumelwano sengqondo wokwenene) kunye ababanga ucele amaqashiso abantu ukuthelekelela izimo nabahlobo babo '(oku ivumela Esilinganisa isivumelwano sengqondo waqonda). Ngelishwa ke, zinganobunzima benkxaso kakhulu indlebe zombini kumphenduli kunye nomhlobo wakhe. Ngoko ke, Goel nabalingane wajika uphando yabo ibe app Facebook Kwakumnandi ukuba badlale.
Emva nxaxheba wavuma ukuba kwisifundo sophando, le app ekhethiweyo nomhlobo kwi-akhawunti Facebook ummangalelwa waza wabuza umbuzo malunga sengqondo ukuba umhlobo (Figure 3.9). Intermixed imibuzo malunga nabahlobo ngokungakhethiyo ekhethiweyo, ummangalelwa naye waphendula imibuzo ngaye. Emva kokuphendula umbuzo malunga umhlobo, ummangalelwa waxelelwa ukuba impendulo yakhe echanekileyo okanye, ukuba umhlobo wakhe ukuba ubaphendule, ummangalelwa wakwazi ukukhuthaza umhlobo wakhe ukuba bathathe inxaxheba. Ngoko ke, uphando isasazeka ngokuyinxenye ngokuthi yokugaya wentsholongwane egazini.
Isazobe 3.9: Interface kuphononongo Friendsense (Goel, Mason, and Watts 2010) . Abaphandi wajika uphando sengqondo umgangatho ibe emnandi, amava gamelike. Umsunguli wabuza nxaxheba zombini imibuzo enzulu imibuzo bechulamancile, ezifana lowo kubonisiwe kulo mfanekiso. Umfanekiso osetyenziswa ngemvume Sharad Goel.
Imibuzo sengqondo ithatyathwe Jikelele Social Survey. Umzekelo, "Ingaba [umhlobo wakho] novelwano amaSirayeli ngaphezu namaPalestina kwi meko Middle East?" Kwaye "Ngaba [umhlobo wakho] ukuhlawula irhafu ephezulu ukuze urhulumente ukunika ukhathalelo lwempilo jikelele?" Phezu kwezi imibuzo enzulu , abaphandi, ugalelwe kwimibuzo bechulamancile: "? Ngaba [umhlobo wakho] kunokuba usele iwayini phezu utywala 'kunye'? Ngaba [umhlobo wakho] kunokuba kuba amandla ukufunda iingqondo, endaweni amandla ukubhabha" le mibuzo buhle wenza inkqubo mnandi ngakumbi nxaxheba kananjalo Indoda uthelekiso umdla: ukuba isivumelwano isimo kuba efanayo imibuzo ezopolitiko ezinzulu njengoko imibuzo bechulamancile malunga ukusela kwamagunya?
Kukho iziphumo ezintathu ukususela sifundo. Okokuqala, abahlobo ekwakunokulindeleka ukunika impendulo efanayo ngaphezu abasemzini, kodwa abahlobo abasenyongweni nangoku baxabana-30% imibuzo. Okwesibini, abaphenduli phezu-ukuqikelela isivumelwano kunye nabahlobo babo. Ngamanye amazwi, uninzi kufunyanwa izimvo olukhoyo phakathi abahlobo nga qa. Okokugqibela, abathathi njengoko kusenokwenzeka ukuba bazi bengavani nabahlobo babo kwimicimbi esinzulu yipolitiki imiba bechulamancile malunga ukusela angoo kuba.
Nangona app akukho Afirka ukudlala (ngelishwa), yaba ngumzekelo omhle wendlela nabaphandi sengqondo uphando aziinkalo ezahlulwe into emnandi. Okuninzi ngokubanzi, kunye nokuyila umsebenzi noyilo, kunokwenzeka ukuphucula amava somsebenzisi nxaxheba zophando. Ngoko ke, ixesha elizayo uzenzela uhlolisiso, thatha ithutyana lokucinga ukuba yintoni onokuyenza ukuze amava ngcono nxaxheba zakho. Abanye boyika ukuba ezi amanyathelo gamification akukhathaze quality data, kodwa ndicinga ukuba abathathi yokudikwa yaye umngcipheko kude ngakumbi esemgangathweni data.
Umsebenzi Goel noogxa nazo zikhanyisa umxholo icandelo elilandelayo: unxulumanisa uphando nezinye imithombo yedatha. Kule meko ngokuthi zidibanise uphando kunye Facebook abaphandi ngokuzenzekelayo ukufumana uluhlu abahlobo nxaxheba '. Kwicandelo elilandelayo, siza kuqwalasela ngonxibelelwano phakathi iisaveyi namanye imithombo yedatha ngokweenkcukacha enkulu.